Mai Chibwe VekwaZimuto: Kukwizana nemaoko ane mafuta anonhuwira
Massage inoitwa pamurume/mukadzi munhu achishandisa mafuta anonhuwira. Ngatiitaure iyoyi igaroitwa mumba. Zvinofambirana nerhoji izvozvo. Endai mundotenga mafuta ku health shop tigozotaura.
Toti maroorana paya muchiri kudanana zvokuti munoda kuva pamwe chete nguva dzese muchiita iya inohi BONDING, kuti muite nyama imwe chete pauviri hwenyu. Pane zvakawanda zvamuita muri mese kupfuura zvimwe. Unenge uchingoda kuva pedo noumwe wako nokuhwa uri pedo. Kubatana kunenge kwakawanda.
Munogeza mese uye munogezesana
Munoita nyaya dzakawanda nokusekesana
Munobika mese nengari yokuti umwe akapinda mukicheni, umwe anomuteverera
Munobatana maoko nokumbundikirana pese pese
Munombotarisana mumaziso nokutaurirana nemaziso chete
Munorhojana chero pamadira. Hakuna kuva pedo napedo kunopfuura kana murume ari mukati mako. Toti wakamubatirira, ukuk ari mukati, uku wakamukiya nemakumbo, uku miromo yenyu yakabatanawo rurimi gwake guri mumuromo wako. Ruoko gwake guri pasi pemagaro ako. Muri nyama imwe chete ipapo uye iwe unotozvihwa kuti pano ndiri nyama imwe nomurume. Ndine chokwadi kuti varumewo vanohwa saizvozvo.
Dai zvaikwanisika kuti varoorani varambe vari pakadai kwemakore kana gumi hawo kubva pavanoroorana, nhamo panyika pano yaidei iri shoma. Hameno chionozoitika kwapera nguva asi unoona vanhu vodzokera pakuti uyu woita zvake uyu oitawo zvake, vave vanhu vaviri zvakare. Ichi chinhu chinosuwisa hacho nokuti nguva yeBONDING inguva yakanaka chose. Unohwa munhu achiti akawana Soul Mate yake. Pamunenge muchiita zvese izvi, pamaita zviri pamusoro, rangarira zuva iroro ukwanise kuritsanangura, nokuti musi wamunotukana, uchada kuti pamunokumbirana ruregerero, kana ukarambigwa, unokwanisa kurangaridza murume wako zvakaitika musi wekuti nowekuti nowekuti, kuti fungwa dzake dzi dzokere kuya kwamaidanana aone investment yamakaita mese pakuroorana kwenyu.
Chemwe chezvamunoita kutanga muchangoroorana kukwizana muviri nemafuta anonhuwira. Ukatarisa munyuzipepa rekwamunogara uchaona kuti pane kunoitwa kosi yokukwizana inohi MASSAGE. Hazvidhuri kuita kosi iyi asi ikosi unobatsira chose. Murume anogona massage murume anodiwa zvokuti. Toti murume ari kuwkiza mukadzi wake. Mukadzi anotanga ageza ouya ovata pasi kana pamubherdha. Murume asina hembhe anotanga kuzora mafuta mumaoko make otanga nokuurunga musoro wemukadzi. Anoti akazora mafuta, wourunga, wozora mafuta wourunga, achingodaro kusvika apedza muviri wese. Toti mukadzi avete nedumbu, murume anoshanda pahuro, mafudzi, mapendekete, musana, magaro, zvidya, makumbo, shoka. Adaro opidigura mukadzi wake, otangazve kumusoro, kumeso, huro, mafudzi, chifuva, mazamu, dumbo, zvidya. pakati pemakumbo, mabvi, mipimbira, shoka. apedza. Paanopedza mukadzi anenge ava kupenya nemafuta muviri wese wanyungurudika usina Stress. Pamwe anenge atovata hope chaidzo.
Varume vanhu vanonakidza chose nokuti paanokwiza apa, kana akasvika pamazamu kana kuti pakati pemakumbo, unoona achitora nguva ipapo achiongorora zvaari kukwiza. iwe vhara zvako maziso wonyungurudisa muviri kuti unyatsohwa paari kukwiza.
Mukadziwo anokwanisa kukwiza murume wake sezvaanoitwa iye. Itawo zvaanokuita zvokuti kana wasvika panonakidza kuita wombotora nguva uripo. Sokuti wasvika pachombo, kazhinji unowana chatomira kare. Imbotamba nacho nemaoko ane mafuta.
Pakukwizana apa, unohwa rudo nomunhu wako. Unohwa kuti muri mese paupenyu. Zvakawanda zvinoreruka kuzvifunga. Murume anowana nguva yokukupa kuti uite yako murume anorudo. Kazhinji nguva yokukwizana iyi inopedzisira yave nguva yerhoji, nokuti kokuti mese munohwa muri mese panyama nefungwa. Kana usina hembhe maziso akatsinzina, murume achikwizirira shoka dzako nezvigumwe, mafuta aya achinhuhwirira, iye agara akati twii kwekanguva, hazviiti kuti apedze zvaari kuita agorega kuda kukurhoja. Kana ada kurhoja rega arhoje, iwe unenge wava nezemo kare kare ukuwo kwatomboerera zvinoerera. Zviri kwaari kuti anopinza sei. Kana achikuda wakavata nemusana ndizvozvo. Ini sokuziva kwangu muviri unenge wakati rukutu zvokuti panota kumboti akapinza momboita zvenyu tunyaya twenyu ari mukati uchihwa munhuwi wemafuta aya pamufuri wake newako, uchihwazve chombo mukati mako. Pamunozotanga kukoirana, moda zviri pasi pasi kungoti pane zvinhu. ndosaka ndati zvinoda mune nguva.
Mukajaira kukwizana kamwe chete pavhiki zvoita Special day. panguva iyoyo munombokangamwa nhamo dzakawanda fungwa dzose dzoinda pamurume/mukadzi wako. Kana manga mune zvamakakonana nazvo pavhiki rese nedzimwewo stress dzakaitika, unohwa sokuti zvese zvagadziriswa muri panhu pamwe chete. kurhojana kwenyu apa kwakasiyana nezvamunoita pakurhojana munovata. Isu vakadzi tinoda nguva yakadai chose nokuti unenge une ATTENTION yomurume wako yese. Kazhinji isu tonopa varume vedu SERVICE dzakawanda. Apa murume anondipawo service ini pasina zvandiri kuita. Vakadzi vashoma vanokangamwa chinhu chakadai. Hino chikazoitwa kamwe pavhiki unotarisira panguva yacho vhiki yese. Ini zvokutengegwa mafurauzi handinei nazvo kusvika pana kukwiziwa nemafuta anonhuwira. Ndoona iri nguva yangu chaiyo iyoyo. Chipo chandinopiwa kamwe chete pavhiki.
Kana mune vana zvinonetsa kuwana nguva yacho. Saturday night mwana avata zvinoita chose. Mapedza zvamuri kuita movatawo henyu. Mangwana rave rimwe zuva.
Kana musina kuzviita kubva pakutanga kwekuroorana kwenyu, iwe wafunga kuzvitanga, udza umwe wako kuti uri kuda kunotireniwa panyaya dze MASSAGE kuti ugozomuitira. Wokumbirawo kuti muende mese. Kana mune anokurererai vana muriko, endai mese. Kana musina itii uyu oenda uyu ozoendawo. Zvawadzidza uya nazvo kumba upurakitize panoumwe wako. Kune mafirimu akawanda amunokwanisa kuona mese. Kana muchipanana nguva dzakadai uchaona kuti kutukana nokupopotedzana kunoita kushoma mumba, kusahwisisana kunodzikira, zvakawanda munoita mese.
Udzai vamwe !!!!!!
Posted by Mai E Chibwe at 12:12